Jenezy 24 - Ny Baiboly
Jenezy toko 24
Ny fanambadian'Isaaka sy Rebekà.
1Efa zoky olona sy nandroso fahanterana Abrahama sady nosoavin'ny Tompo tamin'ny zavatra rehetra. 2Ary hoy Abrahama tamin'ny mpanompony, ilay tranainy indrindra tao an-tranony, nanapaka ny fananany rehetra: Ataovy ato ambanin'ny feko ny tananao, 3hampianianiko anao amin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitry ny lanitra sy Andriamanitry ny tany fa tsy haka vady ho an'ny zanako ao amin'ny zanakavavin'ny Kananeana, izay iraisako monina, hianao, 4fa any amin'ny tanindrazako, any amin'ny tany nihaviako, no halehanao haka vady ho an'Isaaka zanako. 5Ary hoy ny navalin'ilay mpanompony: Angamba tsy hety hiaraka amiko hankaty amin'ity tany ity ny vehivavy; ka ny zanakao ve no tokony hoentiko mankany amin'ny tany nihavianao? 6Hoy Abrahama taminy: Tandremo sao dia entinao mankany ny zanako. 7Iaveh Andriamanitry ny lanitra izay naka ahy tao an-tranon'ny raiko, sy tany amin'ny tany nahaterahako, izay niteny koa no haniraka ny Anjeliny eo alohanao, ka haka vady avy any ho an'ny zanako hianao. 8Ary raha tsy mety hanaraka anao ny vehivavy dia afaka amin'izao fianianana ampanaoviko izao hianao; fa aza entinao mankany ny zanako. 9Dia napetrak'ilay mpanompo tao ambany fen'i Abrahama tompony ny tànany, ka nanao fianianana momba izany teo anatrehany.
10Naka folo tamin'ny ramevan'ny tompony, ilay mpanompo, dia niainga handeha, ary nananany fahefana avokoa ny fananan'ny tompony. Dia nitsangana izy, ka any Mesopotamia any an-tanànan'i Nakora no nalehany. 11Nampandohalihiny teo ivelan'ny tanàna anilan'ny lavaka fantsakàna ny rameva, nony harivariva tamin'ilay fivoahan'ny vehivavy hantsaka iny; 12ka hoy izy: Ry Iaveh, Andriamanitr'i Abrahama tompoko, mba ataovy tojo ny tadiaviko aho anio, ary ampisehoy hatsaram-po Abrahama tompoko. 13Indro aho mijanona eto anilan'ny loharano; ary ny zanakavavin'ny mponina ao an-tanàna hivoaka hantsaka rano, 14ka aoka izay zazavavy hilazako hoe: Ahilano kely ny sininao mba hisotroako, ka hamaly hoe: Misotroa, fa hampisotroiko koa ny ramevanao, no ho ilay notendrenao ho an'Isaaka mpanomponao. Ary izany no hahafantarako fa nampisehoanao hatsaram-po tokoa ny tompoko.
15Tsy mbola tapitra akory ny teniny, dia indro tamy nitondra ny sininy teo an-tsorony Rebekà, zanakavavin'i Batoela zanak'i Melkà vadin'i Nakora rahalahin'i Abrahama. 16Fatratra ny hatsaran-tarehin-drazazavavy, sady virijiny izy, fa tsy mbola nisy lehilahy nahalala azy. Nidina nankeo amin'ny loharano izy, nameno rano ny sininy dia niakatra. 17Nihazakazaka nitsena azy ity mpanompo ka nanao hoe: Mba avelao aho hisotro rano kely amin'ny sininao. 18Dia hoy razazavavy: Misotroa, tompokolahy, sady nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny izy. 19Nony avy nampisotro azy izy, dia nanao hoe: Hantsaka ho an'ny rameva koa aho, hosotroiny mandra-pahafa-po azy. 20Dia nampidininy faingana teo amin'ny tavy fampisotroam-biby ny rano tao an-tsininy, ka nihazakazaka nantsaka teo am-pantsakana indray izy, ary nantsaka ho an'ny rameva rehetra. 21Nandinika azy ralehilahy tsy niteny fa nieritreritra na efa nambinin'ny Tompo tokoa ny diany, na tsia.
22Nony tapi-nisotro avokoa ny rameva, dia nalain-dralehilahy ny masom-bolamena iray, lanjan'antsasa-tsikla, sy ny haba volamena roa, lanjana folo sikla, 23ka hoy izy: Zana-jovy moa hianao? Mba lazao ahy kely izany. Ary mba misy toerana azonay andriana va ao an-tranon-drainao? 24Dia hoy ny navaliny: Zanakavavin'i Batoela zanak'i Melkà, izay naterany tamin'i Nakora aho. 25Ary hoy koa izy: Na ny mololo na ny vilona dia samy betsaka ao aminay; sady ny mololo handriana koa dia misy ao. 26Tamin'izay niondrika ralehilahy, dia niankohoka teo anatrehan'ny Tompo 27ka nanao hoe: Isaorana anie Iaveh, Andriamanitr'i Abrahama tompoko, fa tsy niova famindram-po sy fahamarinana amin'ny tompoko; izaho koa notantànan'ny Tompo amin'ny làlana mankaty amin'ny rahalahin'ny tompoko.
28Dia lasa nihazakazaka razazavavy, nanambara izany zavatra izany tao amin-drainy.
29Nanana anadahy anankiray atao hoe Labana Rebekà, ka nivoaka nihazakazaka Labana nankeo amin-dralehilahy teo amin'ny loharano. 30Nahita ny masom-bola sy ny haba tany an-tànan'ny anabaviny izy, ary nandre ny tenin-dRebekà anabaviny hoe: Izao sy izao no nolazain-dralehilahy tamiko, ka nankeo amin-dralehilahy izay nijanona teo anilan'ny rameva tao amin'ny loharano izy, ka nanao hoe: 31Avia hianao izay notahin'ny Tompo. Nahoana no mijanona aty ivelany hianao? Efa namboatra ny trano aho sy fitoerana ho an'ny rameva. 32Dia niditra tao an-trano ralehilahy. Ary Labana kosa nanesotra ny laselin'ny rameva, dia nanome mololo sy vilona ho an'ny rameva, sy rano hanasana ny tongo-dralehilahy sy ny tongotry ny olona nomba azy. 33Rahefa izany naroson'i Labana ny sakafo; fa hoy ralehilahy: Tsy hihinana aho raha tsy efa voalazako ny teny hambarako. Lazao àry, hoy Labana.
34Hoy izy: Mpanompon'i Abrahama aho. 35Ny tompoko efa nasian'ny Tompo soa be indrindra, ka efa tonga olona be fahefana izy; fa nomeny ondry sy omby, ary mpanompo lahy sy mpanompovavy, ary rameva aman'ampondra. 36Efa antitra Sarà, vadin'ny tompoko, no niteraka tamin'ny tompoko zazalahy anankiray izay notolorany ny fananany rehetra. 37Ary ny tompoko nampianiana ahy, nanao hoe: Aza maka vady ho an-janako amin'ny zanakavavin'ny Kananeana eto tompon'ny tany onenako; 38fa mankanesa any an-tranon'ikaky, any amin'ny havako, ka any maka vady ho an-janako. 39Nilaza tamin'ny tompoko aho, nanao hoe: Angamba tsy hety hanaraka ahy hankaty ny vehivavy. 40Fa novaliany hoe: Iaveh, izay eo anatrehany no handehanako, no haniraka ny Anjeliny hiaraka aminao, sy hanambina ny dianao, ka haka vady ho an-janako, any amin'ny havako sy any an-tranon'ikaky hianao. 41Afaka amin'ny fianianana nataonao hianao rahefa tonga tany amin'ny havako; ary raha tsy manaiky ny fangatahanao izy ireo dia afaka amin'ny fianianana ampanaoviko hianao. 42Nony tonga tao am-pantsakana aho androany, dia nanao hoe: Ry Iaveh, Andriamanitr'i Abrahama tompoko, raha mba sitrakao ihany ny hanambina ny dia nalehako, 43dia indro aho mijanona eto anilan'ny fantsakàna; ka izay zazavavy tamy hantsaka hilazako hoe: Avelao aho mba hisotro rano kely amin'ny sininao, raha sitrakao, ka hamaly ahy hoe: 44Misotroa, fa hantsakako mbamin'ny ramevanao koa; no aoka ho ilay vady nalahatry ny Tompo ho an'ny zanaky ny tompoko. 45Mbola tsy tapitra akory ny teny anakampo nataoko, dia inty Rebekà nivoaka nitondra ny sininy teny an-tsorony, nidina nantsaka teo an-pantsakana; ka hoy aho taminy: Mba omeo kely aho hosotroiko, raha sitrakao. 46Nampidininy niaraka tamin'izay ny siny teny an-tsorony, sady hoy izy: Misotroa; fa hampisotroiko mbamin'ny ramevanao koa. Nisotro àry aho, ary nampisotroiny koa ny rameva. 47Dia nanontany azy aho, nanao hoe: Zanak'iza moa hianao? Ary novaliny hoe: Zanak'i Batoela, zanakalahin'i Nakora, izay naterak'i Melkà taminy, aho. Izay dia nasiako kavina ny orony, ary nasiako haba ny tànany. 48Ary dia niondrika aho, ka niankohoka teo anatrehan'ny Tompo, ary nisaotra an'ny Tompo Andriamanitr'i Abrahama tompoko, izay nitondra ahy tamin'ny làlana marina, mba haka ny zana-drahalahin'ny tompoko ho an'ny zanany. 49Koa ankehitriny, raha mba hanao izay soa sy marina amin'ny tompoko hianareo, dia lazao amiko; ary raha tsy izany kosa ambarao ahy ihany, mba hiviliako ho amin'ny an-kavanana na ho amin'ny an-kavia.
50Dia namaly Labana sy Batoela ka nanao hoe: Avy amin'ny Tompo izao zavatra izao ka tsy azonay atao ny milaza aminao hoe tsy mety na mety. 51Indro Rebekà eo anatrehanao, ento izy ka mandehana, ary aoka ho vadin'ny zanaky ny tomponao izy, araka ny voalazan'ny Tompo. 52Nony nandre izany ity mpanompon'i Abrahama dia niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny Tompo. 53Ary navoakany ny firavaka volafotsy sy firavaka volamena, mbamin'ny fitafiana, ka nomeny an-dRebekà; sady notolorany fanomezana saro-bidy koa ity anadahiny sy ny reniny.
54Izay vao nihinana sy nisotro izy mbamin'ireto olona nomba azy, ary dia nandry. Nony maraina, rahefa nifoha izy ireo, dia hoy ity mpanompo nanao hoe: Alefaso aho hiverina any amin'ny tompoko. 55Fa hoy ny anadahin-dRebekà sy ny reniny: Aoka re mba hipetrapetraka eto aminay andro vitsivitsy aloha ny zazavavy, hafoloana eo ho eo, vao mandeha, 56Ary hoy ralehilahy taminy: Aza dia mahela ahy hianareo, fa efa mba nambinin'ny Tompo ny diako; ka alefaso aho handeha hody any amin'ny tompoko.
57Dia hoy ry zareo: Aoka àry ny zazavavy no hantsointsika hanontaniana izay tiany. 58Dia nantsoiny Rebekà, ka hoy izy taminy: Te-handeha hiaraka amin'ity lehilahy ity va hianao? Ary hoy ny navaliny: Handeha aho. 59Izay vao nalefan'izy ireo Rebekà anabaviny sy ny mpitaiza azy ary ny mpanompon'i Abrahama mbamin'ny olony. 60Nitso-drano an-dRebekà izy, ka nanao taminy hoe: Ho tonga alinalina anie hianao, ranabavy! Ary hahazo ny vavahadin'ny fahavalony anie ny taranakao! 61Dia niainga Rebekà sy ny ankizivaviny nitaingina teo ambony rameva, niaraka tamin-dralehilahy; ka roso ny dian'ity mpanompo, nitondra an-dRebekà.
62Tamin'izany Isaaka tonga avy any amin'ny fantsakan'i Kaï-Roy ka nonina teo amin'ny tany Atsimo. 63Indray hariva, raha ilay nivoaka mba hieritreritra tany an-tsaha iny izy, ka nanopy ny masony, dia indreny misy rameva tamy. 64Rebekà koa nanopy ny masony ka nahatazana an'Isaaka, dia nitsambikina niala teny amin'ny rameva; 65ary nanao tamin'ilay mpanompo hoe: Iza iry lehilahy eny an-tsaha tamy hitsena antsika iry? Dia hoy ilay mpanompo: Ny tompoko iny. 66Koa noraisin-dRebekà ny voaliny, dia nisaronany. Nambaran'ity mpanompo tamin'Isaaka avokoa ny zavatra rehetra nataony. 67Dia nampandrosoin'Isaaka Rebekà ho ao an-dain'i Sara reniny, sady nampakariny ho vady. Ary tia azy izy, ka nionona ny alahelony an-dreniny. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2101 seconds